धेरै मानिस रुचाउँछन् कि जेलाटिनबाट बनेको छ। यस उत्पादन को रचना एक व्यक्ति को लागि धेरै अमीर र उपयोगी छ, तपाईं यसको बारे मा आज को लेख देखि सीखेंगे। जिलेटिन, वास्तवमा, कनेक्टिविटी ऊतक र माछा वा माछाको हड्डीबाट प्राप्त एक पशु गोंद हो। पाचन र उत्पादनको सुखाने को परिणामको रूपमा, रासायनिक अशुद्धता बिना एक प्राकृतिक पदार्थ प्राप्त हुन्छ, जसमा 85% प्रोटीन हुन्छ।
जहाँ जिलेटिन प्रयोग गरिन्छ। उत्पादनको संरचना
यस पदार्थ बिना, मोजा, फल जेली, मार्मलड, माछा र डिब्बा मासु तयार गर्न असम्भव छ, र जेलि भएका बर्तन पनि। यो कन्फेक्शनरी, मिठाई, आइसक्रिमको अपरिहार्य भाग हो। धेरै खानेकुरामा, त्यहाँ जिलेटिन छ। प्राकृतिक पदार्थ को रचना उपयोगी सूक्ष्म क्षण (फास्फोरस, म्याग्नेशियम, पोटेशियम लोहे, जस्ता) र अमीनो एसिड (हाइड्रोक्स टाइप्रोन र प्रोलाइन) मा समृद्ध हुन्छ। 100 ग्राम को क्यालोरिक सामग्री 355 केजील हो।
यो व्यापक रूप देखि डेयरी र ससज उत्पादनहरु मा स्थिरता र पायसी को रूप मा प्रयोग गरिन्छ। यसले रंग संतृप्ति र उत्पादनको स्वाद बढाउँछ, साथै पेयहरू स्पष्ट गर्दछ। तर न केवल खाद्य उद्योगमा जेलिन प्रयोग गर्दछ। पदार्थ औषधि उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ, जसको आधारमा ड्रग कोटिंग्स र पट्टीहरू बनाइन्छ।
यसको अतिरिक्त, यो फोटोग्राफिक चलचित्रहरु र फोटोग्राफिक पेपर को निर्माण को लागि प्रयोग गरिन्छ, उनि मोती र मुद्रा बिल को निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ। यस पदार्थको आधारमा कस्मेटिक उत्पादनहरू (मास्क, क्रीम, बाल्म, आदि) बनाइन्छ। जिलेटिनको विशिष्ट गुणहरू छन्।
रचना र उपयोगी गुणहरू
उत्पादनको मुख्य फाईदा मध्ये एक यसको संरचनामा ग्लिसिनको उपस्थिति हो। यो अमीनो एसिड शरीर को अत्यावश्यक गतिविधि को प्रक्रिया मा शामिल छ। ग्लिसिन को अतिरिक्त, पदार्थ एस्सारिक, एलन र ग्लुटेमिक एसिड मा अमीर छ , यो उनि ऊर्जा संग व्यक्ति को आपूर्ति, तंत्रिका र हृदय प्रणाली को मजबूत, र चयापचय मा सुधार पनि हो।
विशेष लाभ उहाँले अस्टोक्रोन्ड्रोसिस र आंत विकारबाट पीडित मानिसहरूलाई ल्याउनुहुन्छ। जेलेटिनमा भएका उत्पादनहरूको प्रयोगले बाल, छाला र नाखूनको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं जिलेटिन खाना भित्र भित्र र बाहिर लिन सक्नुहुनेछ । उत्पादन को रचना भिटामिन ई संग समृद्ध छ, जसको छाला र कपाल को follicles मा लाभकारी प्रभाव छ। कुनै उत्पादनको कारण बिना मास्क र शैम्पो पुनरुत्थान गर्न, सुन्दरता र स्वास्थ्यको पुन: फर्कन मद्दत पुर्याउँदछ।
छाला र नाखूनका लागि गेलाटिन तयारीहरू आफैलाई गर्न सकिन्छ। यो उपकरणको फाइदा भनेको हो कि त्यो पैसाको लागि कुनै सुपरमार्केटमा खरीद गर्न सकिन्छ। जब भित्री नाखून, समस्या छाला, मुँहासेको प्रवद्र्धन, जिलेटिन सिफारिस गरिन्छ। उत्पादनको रचनाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई सकारात्मक असर पार्छ। यो लामो समयदेखि थाहा छ कि जिलेटिन मिश्रण (पेय) अतिरिक्त पाउन्ड र संयुक्त दुखाइको राहत दिन्छ।
स्वादिष्ट मर्मेड या मिठाई स्ल्फेल को मजा लेने को अवसर को सम्झना मत करो। यसबाहेक, उत्पादन व्यावहारिक रूप देखि कुनै विनाशकारी छैन। सावधानीको साथ, यो केवल डाईथेसिसिस र हृदय रोग को लागी रोगीहरु लाई लिन सकिन्छ।
बखत हत्ते: उपयोगी गुण र विनाशकारी, फोटो। कसरी बर्थवाट महसुस गर्नुहुन्छ?
ताजा झन्झट रस कसरी पिउने? विशेषताहरू, सिफारिसहरू र अनुपातहरू
केकडा स्टिकहरू: रचना, उपयोगिता र सलादहरूसँग
भेडा पनीर: स्वास्थ्य लाभहरू, सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकारहरू
कसरी घर मा मकै को पपकर्न बनाउन? मकै पपकर्न कसरी खाना पकाउनु?
Sam हैरिस - वैज्ञानिक, दार्शनिक र नास्तिक लेखक
"प्रतीक्षा मेरो लागि": मेरो लागि देख छ? मेरो लागि देख गर्नुपर्छ जसले म कसरी थाहा छ?